Vaovao - Vahaolana notapatapahina tamin'ny laser ho an'ny paompam-by fiara mandeha amin'ny fiara
Vahaolana notapahina tamin'ny laser ho an'ny paompam-by fiara mandeha amin'ny fiara
Vahaolana fanapahana laser ho an'ny tsipika fiaran'ny fiara any Korea
Ny milina fanapahana fantsom-laser dia manana tombony miavaka amin'ny fikarakarana ny Cross Car Beams ) satria singa sarotra izy ireo izay mandray anjara lehibe amin'ny fitoniana sy ny fiarovana ny fiara rehetra mampiasa azy ireo. Noho izany ny kalitaon'ny vokatra vita dia zava-dehibe indrindra. Amin'ny maha zana-kazo tsirairay ao anaty fiara azy ireo dia manome antoka izy ireo fa tsy hangeja ny efitranon'ny mpandeha raha sendra fifandonana. Ny vatan'ny Cross Car koa dia manohana ny familiana, ny kitapo an'habakabaka ary ny solaitrabe iray manontolo. Miankina amin'ny maodely, azontsika atao ny manamboatra an'ity singa fototra ity amin'ny vy na aliminioma, ary ny milina fanapahana laser dia mahavita tsara amin'ny fanapahana ireo fitaovana ireo.
Orinasa moto malaza any Korea ny Hyundai Motor Company, izay tapa-kevitra ny ho mpiara-miasa mandritra ny androm-piainana amin'ny fiara sy ny maro hafa. Ny orinasa - izay mitarika ny Hyundai Motor Group, rafitra fandraharahana manavao izay afaka mivezivezy loharano avy amin'ny vy an-tsokosoko mankany amin'ny fiara vita. Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana sy ny fanatsarana ny fitaovan'izy ireo dia nanapa-kevitra ny hampiditra masinina fanapahana laser fantsona ny orinasa.
Customer fepetra takiana
1. Ny vokatra ateraky ny mpanjifa dia fantsona ho an'ny indostrian'ny fiara, ary mila fanodinana goavana sy mandeha ho azy.
2. Sodina savaivony dia 25A-75A
3. Ny halavan'ny sodina vita dia 1.5m
4. Ny halavan'ny fantsom-pandrosoana dia 8m
5. Rehefa avy tamin'ny laser fanapahana, dia nangataka ny milina sandry mivantana dia afaka hihazona ny sodina vita ho an'ny fanaraha-maso sy ny asa fanaovan-gazety hiondrika fanodinana;
6. Customer manana fepetra tamin'ny laser fanapahana sy ny fahombiazan'ny marina, ary ny ambony indrindra fikarakarana hafainganam-pandeha dia tsy latsaky ny 100 R / M;
7. ny taom-piotazam fizarana dia tsy ho nanan Burr
8. Ny faribolana voapaika dia tokony ho akaikin'ny boribory lavorary
Vahaolana Golden Laser
Taorian'ny fandinihana tsara dia nanangana vondrona mpikaroka manokana izahay, ao anatin'izany ny sampana R&D sy ny mpitantana ny famokarana mba hahitana vahaolana momba ny fepetra takiana amin'ny fanapahana hazo andramena.
Eo amin'ny fototry ny P2060A, namboarinay ny milina fanodinam-boho laser P2080A mba hamenoana ny fepetra takian'izy ireo amin'ny fanapahana fantsona 8 halavany sy ny famoahana mandeha ho azy.
Tamin'ny faran'ny fanangonana fitaovana dia nanampy sandrin'ny robot iray ho an'ny fakana fantsona izy io. Mba hiantohana ny fametahana ny marina, ny singa tsirairay dia tokony hofehezina mafy amin'ny sandan'ny robot alohan'ny fanapahana azy.
Aorian'ny fanapahana, ny sandrin'ny robot dia hanatitra ny fantsom-panafody amin'ny fomba manaraka ho an'ny fanaovan-gazety sy ny hiondrika.
Ny lavaky ny fantsona miondrika dia tokony hokapain'ny masinina fanapahana laser 3D robot.
Makà vahaolana ampanjifaina!
Araka ny hitanao dia misy fomba maro hampiasana ny milina fanodinana LASER TUBE hahitana ny tsipika famokarana mandeha ho azy. Ary izao dia tonga ny fotoana ahazoanao ny vahaolana namboarina sy hizaha ireo zavatra azo atao.